ညီအမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစေတီတော်မှာ နတ်လူသာဓုခေါ်စေမယ့် အလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင် – Askstyle
ညီအမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစေတီတော်မှာ နတ်လူသာဓုခေါ်စေမယ့် အလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင်
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ တစ်ခေတ်တခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက်နာမည်ကျော်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးလေး ပပဝင်းခင်ကို မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။ သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အသံရှတတလေးက ပရိတ်သတ်တွေအချစ်ပိုနေရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးတွေပါပဲနော်။
အချစ် အမုန်း အလွမ်းကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင် နိုင်သူလေးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့အချိန်အခါမှာနာမည်ကျော် ထိပ်တန်းမင်းသမီးစာရင်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ သူမဟာ ပရဟိတလုပ်ရတာအရမ်းကိုဝါသနာပါပြီးတော့ ညီအမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလည်း မကြာခဏဆိုသလို အလှူအတန်းလေးတွေလုပ်တတ်ပါသေးတယ်နော်။
အခုတစ်ခါမှာလည်း ညီအမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ နတ်လူသာဓုခေါ်စေမယ့်အလှူလေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်နော်။ သူမတို့ဟာ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစေတီတော်အတွက် ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိကကို အလှူငွေ ၅သိန်းကျပ်နဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီလိုမျိုးအလှူအတန်းရက်ရောလွန်းတာကြောင့် သူမဟာ ဘာပဲလုပ်လုပ်အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။ကဲ… ညီအမနှစ်ယောက်အလှူပြုခဲ့စဉ်ကပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source : Pa Pa Win Khin,CRD-Myanmarload
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ တဈခတျေတခါက လြှမျးလြှမျးတောကျနာမညျကြျောလေးတဈယောကျဖွဈခဲ့ပွီးတော့ ပရိတျသတျတှေ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးလေး ပပဝငျးခငျကို မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနျော။ သူမရဲ့ထူးခွားတဲ့အသံရှတတလေးက ပရိတျသတျတှအေခဈြပိုနရေတဲ့အကွောငျးအရငျးလေးတှပေါပဲနျော။
အခဈြ အမုနျး အလှမျးကရြာဇာတျရုပျကိုပီပွငျစှာသရုပျဆောငျ နိုငျသူလေးဖွဈတဲ့အတှကျ အဲ့အခြိနျအခါမှာနာမညျကြျော ထိပျတနျးမငျးသမီးစာရငျးဝငျခဲ့ပါသေးတယျနျော။ သူမဟာ ပရဟိတလုပျရတာအရမျးကိုဝါသနာပါပွီးတော့ ညီအမနှဈယောကျပေါငျးပွီးလညျး မကွာခဏဆိုသလို အလှူအတနျးလေးတှလေုပျတတျပါသေးတယျနျော။
အခုတဈခါမှာလညျး ညီအမနှဈယောကျပေါငျးပွီးတော့ နတျလူသာဓုချေါစမေယျ့အလှူလေးကို ပွုလုပျခဲ့ပွနျပါတယျနျော။ သူမတို့ဟာ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးစတေီတျောအတှကျ ဆရာတျောအရှငျဆန်ဒာဓိကကို အလှူငှေ ၅သိနျးကပျြနဲ့ တဈနိုငျတဈပိုငျလှူဒါနျးခဲ့ကွတာပဲဖွဈပါတယျနျော။ ဒီလိုမြိုးအလှူအတနျးရကျရောလှနျးတာကွောငျ့ သူမဟာ ဘာပဲလုပျလုပျအောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိနခေဲ့တယျလို့ပွောရငျလညျးမမှားပါဘူးနျော။ကဲ… ညီအမနှဈယောကျအလှူပွုခဲ့စဉျကပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။